အင်္ဂါဂြိုဟ် Gaming MGL1 မျက်မှန်ပြန်လည်သုံးသပ် | Gadget သတင်း
Mars Gaming MGL1 မျက်မှန်များကိုစစ်ဆေးခြင်း
Juan Colilla | | ပစ္စည်းများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, reviews, ဂိမ်းတွေကက
ယနေ့ခေတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်တိုးတက်လာခြင်း၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခြင်း၊ အသေးစိတ်ဂရပ်ဖစ်များပိုများလာခြင်း၊ ပိုမို၍ အပ်နှံရန်လိုအပ်ခြင်းနှင့်နည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းများရှိသော်လည်း၎င်းတွင်အားနည်းချက်များရှိနေသည်။ ဖန်သားပြင်များ.
ယခုဖျော်ဖြေမှုဖန်သားပြင်များသည်ယခင်ကကဲ့သို့အန္တရာယ်မကင်းသောကြောင့်ဖျော်ဖြေရေးအမျိုးအစားများကိုပိုမိုအပ်နှံရန်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုပေးရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကိုထိခိုက်သည် အထူးသဖြင့်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်နှင့်အလင်းရောင်မကောင်းသောအခြေအနေများတွင်နှစ်သက်သည်။
ကြောင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကိုမှနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတားဆီး ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာကွယ်မှုအချို့ကိုယူရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂိမ်းကစားသူတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဂိမ်းမျက်မှန်များသည်မည်မျှအထိအသုံး ၀ င်သည်၊
မျက်မှောက်ခေတ်ဖန်သားပြင်များမှ "ကြိမ်နှုန်းမြင့်" အပြာအလင်းကိုပိတ်ဆို့ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများတွင်မောပန်းခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည့်အပြင်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ခြင်းအားနာရီနှင့်နာရီများမှအနာများမှကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ပေးသောမျက်မှန်များ? ပြီးတော့ဒီဟာကယူရို ၂၀ ထက်လျော့နည်းနေသလား။ အခုလာခဲ့!
ဤထုတ်ကုန်၏ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သည့်အခါလူတိုင်း (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်) ထင်သည့်အရာ၊ မသိသောအံ့ဖွယ်ဖြစ်သည် သူတို့ကရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောတာ ဒါပေမယ့်အဲဒါဘာမှမလုပ်ဘူး
အပြာရောင်အလင်းအမှန်တကယ်ဖြတ်သန်းခြင်းမရှိဘဲမှန်ဘီလူးချွတ် bounce ။
ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်သည်“ wow၊ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသည်” ဟုသင်ထင်မြင်နေပြီးသင်မျက်မှန်တပ်ရန်သင်မသုံးပါကဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သငျသညျသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သတိထားမိသို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုသင်ရုံဝယ်လိုက်ပြီးသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့သည်အလင်း၊ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသင်ကိုယ်တိုင်မယုံသော်လည်း ... သူတို့အလုပ်လုပ်လား
၄ ရက် ၅ ရက်ခန့်ကြာပြီးနောက် (အထူးသဖြင့်သင်အနိမ့်အလတ်ကစားသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်) သင်အမှန်တကယ်ရှိသည်ကိုသင်သဘောပေါက်သည် သင်၏မျက်လုံးများမည်သို့ခြောက်သွေ့သွားသည်ကိုသင်သတိမပြုမိပါ မှောင်လာတဲ့အခါ ၂ မိနစ်တိုင်းမှာစိုစွတ်နေစရာမလိုတော့ဘူး၊ အကုန်လုံးကိုပိတ်ထားဖို့လိုတယ်။ မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချစရာမလိုဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းပေမဲ့မျက်မှန်ကမယုံနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ မြင်ကွင်းကိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေပြီးသင့်မျက်လုံးများသည်သူတို့လုပ်နေကျအတိုင်းအဆိုးမြင်မတုံ့ပြန်ကြပါ။ သင်ကြိုက်သလောက်ကြာကြာကစားနိုင်သည်။ သင်နှင့်သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်း (သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ကိုပြင်းထန်စွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ) သည်မည်သည့်အခါမှမပြုလုပ်ပါ။ "ပင်ပန်းမျက်စိ" အားဖြင့်အတားအဆီးဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါဒီနေ့သူတို့မရှိဘဲမကစားနိုင်ဘူးအနည်းဆုံးတော့အချိန်အကြာကြီးမလုပ်မိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများမှအဆင်မပြေမှုများကကျွန်ုပ်အား X အချိန်တိုင်းကိုရပ်တန့်စေပြီးကျွန်ုပ်မျက်နှာပြင်ရှေ့တွင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုအနားယူရန်အဆုံးသတ်စေပြီးဤထုတ်ကုန်ကကူညီလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်နေသောသို့မဟုတ်ကစားသူများနှင့်၎င်းသည်မည်သည့်အလင်းရောင်နှင့်မဆိုအလုပ်လုပ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်းရှိဓာတ်ပုံတွင်သင်မြင်တွေ့ရမည့်အတိုင်းမျက်မှန်မှအပြာရောင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အောက်ပါအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ် Flash ကိုတင်ရန်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ယူရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ flash ၏။ ဤမျက်မှန်များ၏မှန်ဘီလူးများကိုကင်မရာသည်အပြာရောင်အလင်းမှအပကျန်အလင်းများအားလုံးကိုဖြတ်သန်းစေခဲ့သည် မှန်ဘီလူးကိုချွတ် bounce မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖြူရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်အတော်အတန်ပြင်းထန်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဖြူရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်သင်မြင်နေရသည့်တူညီသောအပြာရောင်အလင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မျက်လုံးများကို၎င်းတို့ဝတ်ဆင်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုကာကွယ်ပေးမည့်အလင်းဖြစ်သည်။ နှင့်ခြားနားချက်တစ်ခုဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ခြင်းမှတစ် ဦး အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းမှသိသာသည်, ငါတို့အရာအားလုံးပူနွေးသောအရောင်ရှိပြီးကြောင်းသေးသတိထားမိပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့အပြာရောင်အရောင်ကိုမြင်လျှင်ရပ်တန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီမျက်မှန်တွေဟာငါတို့ရဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအပျက်သဘောမသက်ရောက်စေပါဘူး။
ထုတ်ကုန်၏ဤအမျိုးအစား၏ပုံမှန်နွေး supersaturated အရောင်ဝိသေသ၏ရှင်းလင်းသောအရောင်ကြည်လင်။
သုံးသပ်ချက် - Juan Colilla
အကယ်၍ သင်၏ဗီဒီယိုဂိမ်းသည်ကြာမြင့်ချိန်သို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်ရှိသောအခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ဆေးညွှန်းမျက်မှန်ကိုမသုံးရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုယူရို ၁၆ အတွက်ဝယ်ယူရန်အပြည့်အဝအကြံပြုသည်။ သင်တစ် ဦး မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲမှုကိုသတိထားမိသွားကြသည် ဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်ရှိသောသင်၏အတွေ့အကြုံတွင်သင်သည်ကြာကြာခံနိုင်သည်၊ ခြောက်သွေ့သောမျက်လုံးများကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ဘဲသင်၏အလင်းအားဤအမျိုးအစားနှင့်ထိတွေ့မှုကြာမြင့်စွာကြာမြင့်စွာပြုလုပ်သောကြောင့်ကြာရှည်ခံသောပျက်စီးမှုများမှသင်၏မျက်လုံးများကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုသူများဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင် ၂ နာရီကျော်ကျော်သောဖန်သားပြင်များကိုမသုံးသောသူများဖြစ်သည် သင်ဆေးညွှန်းမျက်မှန်တပ်ထားတယ်၎င်းတို့သည်သင့်မျက်မှန်များမဟုတ်ပါ၊ ယခင်အတွက်ဤအမျိုးအစားမျက်မှန်များကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့၏မျက်လုံးများသည်ငြီးငွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင်သူ့အားအခြားဆေးညွှန်းမျက်မှန်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောမျက်မှန်ပုံစံရှိသည်။ အကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံအတွက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Mars Gaming MGL1 မျက်မှန်များကိုစစ်ဆေးခြင်း
Podcasting အတွက်အကောင်းဆုံးသော Behringer Xenyx Q802USB